Bob Iger, ayaa xabadka ka saaraya waxyaabaha uu ka kooban yahay Disney + | Wararka IPhone
Bob Iger ayaa xabadka ka saaraya waxyaabaha uu ka kooban yahay Disney +
Agaasimaha Disney Bob Iger Wuxuu sii wadaa inuu xiriir aad u wanaagsan la yeesho Apple iyo agaasimayaasheeda, in kasta oo ay run tahay inuu isagu difaaco waxa u gaarka ah sida maamule kasta oo shirkadeed ah. Xaaladdan oo kale, hadalada Iger waxay si toos ah diiradda u saarayaan tartanka ay ka samayn karto adeegiisa fiidiyoowga ah ee ka socda Apple, Apple TV +.
Intaas waxaa sii dheer, hadaladiisa, wuxuu ku sharaxayaa inuusan ka walaacsaneyn qiimaha hoose ee Apple TV + marka loo eego Disney + ama ku saabsan waxyaabaha laga heli doono Apple. Sida uu sheegay maareeyuhu laftiisu badeecadaadu wax badan ayey kaga duwan tahay adeegyada kale ee galka si aadan uga walwalin.
Hadalada uu Iger ka sheegay CNBC wuxuu si cad u muujinayaa inuu dagan yahay tartanka iyo in kastoo ay run tahay Apple TV + wuxuu leeyahay qiimo ka hooseeya (4,99 doolar / euro bishii) marka loo eego adeegiisa Disney + (oo ku kacaya 7 doolar bishiiba) waxa farqiga u dhexeeya ayaa ah in nuxurkeedu yahay mid gaar ah. Dhinaca kale, wuxuu fahamsan yahay in adeegyada sida Netflix ama HBO ay ka qiimo sarreeyaan iyaga, sidaas darteed wuxuu sidoo kale rajeynayaa inuu ka dhigto iyaga tartamayaal ahaan oo kaliya eegaya qiimaha.
Waxa umuuqda inay faa iido u leeyihiin adeegan noocan ah khaasatan qiimaheeda, ee waa halkii ay ka koobnaan lahaayeen ama buuga ay soo bandhigeen Bob Iger ayaana xabadka la wareegaya saxaafada horteeda wax walboo Disney + ay na siin karto marka loo eego adeega Apple ama shirkadaha intiisa kale. Dareenkan, waxa ay tahay inaan samayno waa inaan sugno si aan u aragno waxa Apple TV + uu bixin karo wax badan marka loo eego adeegyada kale ee la midka ah, ka dib waxaan u geli doonnaa inaan qiimeyno midka noogu qiimo badan inkasta oo Iger u muuqdo inuu si cad u haysto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Bob Iger ayaa xabadka ka saaraya waxyaabaha uu ka kooban yahay Disney +
Beta-kii afaraad ee iOS 13.2 ee loogu talagalay horumariyeyaasha ayaa hadda la heli karaa
Kiisaska maqaarka ugu fiican ee ugu fiican iPad Pro